दुबईको बहुप्रतिष्ठित कम्पनिमा ६०० जना महिला पुरुष लाई रोजगार को अवसर अरु के के सुबिधा हरु हुने ? - बैदेशिक पोष्ट
दुबईको बहुप्रतिष्ठित कम्पनिमा ६०० जना महिला पुरुष लाई रोजगार को अवसर अरु के के सुबिधा हरु हुने ?
कार्तिक २६, २०७८ १९;०४ मध्यान्ह प्रकाशित
काठमाडौँ । यु.ए.ई.को बहुप्रतिष्ठित कम्पनि Khidmah Sole Proprietorship llc UAE मा नेपाली पुरुष तथा महिला कामदारको माग गरेको छ । Khidmah Sole Proprietorship llc UAE कम्पनीले क्लिनर पोस्टका लागि ६०० जना नेपाली कामदारको माग गरेको हो ।
न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ । कामदारले हप्तामा ६ दिन र दैनिक ८ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ । करार अवधि २ वर्षे रहेको छ । न्यूनतम तलब नेपाली रु. २५,८५६/- रहने कम्पनीको डिमाण्ड लेटर मा उल्लेखित छ ।
तलब खान बस्न सहित २५ हजार माथि रहेको छ । इच्छुक कामदारले जब ट्रयाक प्रा. लि. को कार्यालय धापासी, काठमाडौँ मा मंसिर ०३ देखि ०५ गते सम्म अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।
यु.ए.ई.को पेट्रोल पम्पमा रोजगार । फ्री भिसा फ्री टिकेट । न्युनतम तलब ४८ हजार भन्दा माथि हुने
मंसिर १५, २०७८ २१;४५ मध्यान्ह प्रकाशित
यु.ए.ई.को MacDonald’s मा रोजगारको अबसर । फ्री भिसा फ्री टिकेट सहित खाना बस्नको पनि सुबिधा
मंसिर १५, २०७८ २०;०१ मध्यान्ह प्रकाशित
कुवेतमा करिब २ लाख मासिक तलब भएको कम्पनीमा रोजगार । यी अफिस बाट अप्लाई गर्न सक्नु हुन्छ ।
मंसिर १५, २०७८ १६;३३ मध्यान्ह प्रकाशित
यु.ए.ई.को एरपोर्टमा नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारको अबसर । तलबको सेवा सुबिधाहरु यस प्रकार
मंसिर १५, २०७८ १२;१२ मध्यान्ह प्रकाशित
साउदी अरबमा १ लाख ७५ हजार माथि तलब भएको कम्पनीमा रोजगारको अबसर ।
मंसिर १४, २०७८ २२;१४ मध्यान्ह प्रकाशित